Cake Pancake + Cunto canjeelo ah oo loo kariyey Cake - Keega
Dhaxan-Qaboojin Iyo Iicil
Cunto Kariska Cake
Keega canjeelada ah oo u eg xirmooyin canjeero ah, wuxuu u dhadhamayaa sida canjeelada waase keeg!
Keegga canjeelada ayaa noqon kara keega ugu badan ee waqtiga oo dhan ah. Waa keeg u eg canjeelada oo u dhadhamiya canjeero laakiin farsamo ahaan waa keeg. Mise waa Maxaa runtii keeg ka sameeya keeg si kasta ha noqotee? Waxaan la yaabaa wax la mid ah oo ku saabsan keega. Haddii uusan lahayn wax dhaxan ah waa uun muffin?
Fikradaha Cake Pancake
In yar dib ayaan u dhammeeyay quraacda barashada sariirta ku dhammaystir xidhmo canjeelo ah iyo dhalo sharoobada ah oo waxyeelleeya cuf isjiidadka Sifiican iskama soo wici karin inaan qurxiyo keega inkasta oo hadaan unka dhigo sida canjeelada oo kale, waa inaan dhadhamiyaa sida canjeelada sidoo kale.
Aad baan ugu raaxeystay sameynta keeggaan, waxaan ku daray dhacdo kamid ah Doolsho Xun ku saabsan Shabakada Cuntada iyada oo qayb ka ah nafaqada weyn. Keegga waxaa loo sameeyay dabaaldega saaxiibkey Krissy ee daahfurka boggeeda cuntada, Is-shaaciyay Foodie .
Helitaanka 'dhadhanka canjeelada' waxay ahayd mid aad u adag waxaanan ku tijaabiyay tan oo ah 'canjeelada' cuntooyinka keegga ah ee la kariyey ee aan ka helay khadka tooska ah oo in badan oo ka mid ah ay ku dhacaan. Ma aanan dooneynin inaan isticmaalo Bisquick canjeelada isku qasan oo keliya.
Markaan ka fekero inaan wax ku qaniino canjeero waxaan xasuustaa subag, sharoobada maple iyo jilicsanaantaas yar, oo ka fudud dusha sare hawadda. Kaliya madadaalo, waxaan ku dhex tuuray hilib doofaar ah oo candi ah!
Marka aan toos u helno tan. Kani waa keeg, oo u eg canjeero, laakiin maahan canjeelada, runti waa keeg, laakiin wuxuu u dhadhamiyaa sida canjeelada…
Sidee Loo Sameeyaa Cake dhalashadiisa
Uma baahnid inaad si qurux badan uhesho si aad u sameysid keegga dhalashada canjeerada gaarka ah! Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa saddex lix keega moofo ah, jajaban oo dahaaran. Ha ka welwelin inaad si dhammaystiran u xajisato ama aad dhab ahaantii ka dhigto kuwo siman.
Qabow dartiis khalad uma khaldami kartid buttercream fudud oo lagu carfiyey tsp oo laga soosaaray khariidad maple ah ama waxaad sameyn kartaa caramel buttercream cusbada leh. Xoogaa yar oo shaqo ah laakiin sooooo dhadhan fiican!
sida loo weyneeyo buuxinta keega tufaaxa
Ka dib markaad jajabiso keegaaga, ku qabooji qaboojiyaha si uusan u siiban oo uusan u boodbooyin inta lagu jiro qurxinta.
Khayaaliga canjeelada, si fudud u soo bixi qaar ka mid ah masaska foolasha foolka maroodi. Ka dhig abeesada qiyaastii iyo dhumuc dhudhun ah Maska nuska ku jar ama mindi ama pizza cutter si uu dhinac ugu simo. Ku duub maska ​​keega.
Waxaan jecelahay in aan dhinacyada ku dhajiyo daloollo iyo dhibco yar si aan u siiyo cufnaan dhab ah oo xumbo ka timaadda. Kahor intaadan maska ​​xiga saarin, dusha ku rinji isku dar ah midabka cuntada foolka maroodiga iyo aalkolada. Isticmaal burush xoqan oo aan ku habboonayn wax kale oo badan.
Waxaan sidoo kale isku dayaa inaan ka dhigo lakabyo kasta oo canjeelo ah waxoogaa yar oo kala duwan oo dhinac ah. Isku day inaadan ka dhigin kuwo aad u qumman.
sida loo sameeyo keega foosto labalaab ah
Mar alla markii aad dusha sare gaadho, si yar u jilci buttercream sidaa darteed dusha sare ayaa siman. Ka dib u soo bixi qayb weyn oo ka mid ah foolka maroodiga oo daboolo dusha sare. Waxaan jecelahay inaan dhinac dhinac sudho sida ay si dhib yar u xajineyso oo gebi ahaantiisna ay qarka u saaran tahay inay rogmato!
Marka lakabka ugu dambeeya uu daaran yahay, ku sawir rinjiga fondantiga isla isku darka midabka cunada maroodiga. Haddii aad runtii dareemeyso dhiirrigelin, waxaad samayn kartaa xoogaa sharoobo dhab ah oo macquul ah adoo isticmaalaya tayda cunto karinta dhabta ah kuna midabeynaya fool maroodi iyo midab cunto diirran oo bunni ah. Ama waad isticmaali kartaa decogel isku midab isku mid ah haddii aadan rabin inaad iskaa u sameysato.
Waxaan jecelahay inaan ku shubo dhawr dhibic canjeelada qaar ka mid ah baro 'cufan'. Waxaa sii dheer runtii waan jeclahay isticmaalka shumaca shumaca lol.
Waxaan sameeyay laba xabbo oo subag ah laakiin midab leh midab huruud ah iyo taabasho fool-maroodi ah waxaanan u kala jaray laba jibbaarane oo yaryar. Haddii aad rabto inaad sameysid buluug, waxaad u midabeyn kartaa buluug qaali ah oo buluug ah oo taabasho leh guduud. Isu rogo kubbad una adeegso aalad moodal ah si aad u xoqdo dhamaadka si aad ugu ekaato buluug.
Dhig dufankaaga canjeelada ah ee ku dhammaaday qaboojiyaha si aad u qabowdid ka hor intaadan shahwada shaandhayn. Qabowgu wuxuu kaa caawin doonaa gelatin inuu dhaqso u dego.
Haddii sharoobada mid ka mid ahi ka soo daadato geeska, iska jar xad-dhaafka oo dib ugu celi weelka si aad hadhow u isticmaasho.
Taasi waa! Sameynta keega canjeelada waa mid aad u xiiso badan oo si fudud loo sameeyo. Fikrad wanaagsan oo keeg dhalasho oo loogu talagalay qofka jecel canjeelada noloshaada.
Subax wanaagsan! Keeggan waxaa loogu talagalay qofka jecel quraacda, wuxuu u dhadhamayaa sida xirmooyin canjeero cusub ah. Ku laabo qaybo ka mid ah maple syrup-buttercream-buttercream iyo hilib doofaar candied! Yum! Cuntadani waxay ka dhigeysaa seddex 6'x2 'wareegyo keeg ah ama labo wareeg ah oo 8'x2' ah. Waqtiga Diyaarinta:labaatan daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:konton daqiiqado Kalori:2023kcal
Waxyaabaha ay ka kooban tahay
Waxyaabaha ay ka kooban tahay Hilibka Bacon
▢8 xaleefyo (8 xaleefyo) hilib doofaar
▢1/3 koob (1/3 koob) sharoobada maple
▢1/2 koob (1/2 koob) sonkorta buniga ah
Waxyaabaha Keega Ah
▢12 oz (340 g) Burka AP
▢12 oz (340 g) sonkor aad u fiican
▢2 1/2 tsp (2 1/2 tsp) budada dubista
▢8 oz (227 g) subag aan cusbo lahayn qolka
▢1/2 tsp (1/2 tsp) cusbo
▢1 tsp (1 tsp) vanilj
▢laba tsp (laba tsp) dhadhamin khariidad
▢4 weyn (4 weyn) ukunta qolka
▢8 oz (227 g) caano qolka
Hilib doofaar ah
Hilib doofaar saar silig ku dul xir xaashida wax lagu dubo ee ku-daboolan, ku caday dusha sare ee hilibka doofaarka sharoobada maple dusheeda ku saydhaa sonkorta buniga ah
Waxaad ku karisaa foorno diirimaad ah 400ºF / 200ºC illaa 15 daqiiqo.
Hilib doofaar ku dhaji xarigga siligga, burushka sharoobada maple ee dhinaca kale ku dul rusheeya sonkorta buniga ah.
Dub ilaa 15 daqiiqo oo kale ah ama ilaa inta laga gaarayo heerka qalalaasaha la doonayo.
Markaad foornada ka saarto, ku dul dhig warqadda xoqan oo rogrogo badiyaa illaa la qaboojiyo si looga ilaaliyo inay ku dhegto.
Kuleyli foornada ilaa 350ºF / 175ºC. Dufan sedex 8 'digsi keeg leh googo' cake '.
Isku dar bur, budada dubista iyo milixda oo dhinac dhigo
In baaquli of fiicni taagan la lifaaqa suufka, kareemka kareemka ilaa jilicsan. Ku daadi sonkorta oo xawaare u rogo dhexdhexaad. Isku dar 6-10 daqiiqadood illaa midab khafiif ah oo qalafsan
Ku dar ukuntaada HAL MARKII. Isku dar daqiiqad buuxda ka dib markii aad ku dartay ukunta ka hor intaadan ku darin tan xigta.
Kudar burkaaga iyo caanahaaga sedex meelood meel. Ka bilow 1/3 oo bur ah, ha la isku daro, ka dibna ku dar 1/3 ee caanahaaga, ka dibna bur, ka dib caano, ka dibna bur, ka dib caano. Isku qas 15 ilbidhiqsi oo kale si aad isugu darto.
U qaybi saddex 8 'digsi. Lakabyadu way ka yara yaraan doonaan sida caadiga ah markaa waxaad ka heli doontaa 'murugasho' badan bunni ka soo horjeedka digsiga oo ku daraya dhadhanka canjeelada. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa laba 8 'digsiyo haddii aad rabto lakabyo dhaadheer.
Dub ilaa 20 daqiiqo ama ilaa burushka la galiyay ay nadiif ka soo baxaan. U oggolow qabow iyo baraf leh subag macaan oo fudud oo lagu daro tsp ah dhadhanka khariidada iyo hilibka doofaarka aad jarjartey.
Markaad jirdileyso keega, ku dhalaal baaquli baaquli yar yar kuna cadayo lakab kasta si aad ugu shubto keega canjeelada keega.
Kalori:2023kcal(101%)|Kaarboohaydraytyada:267g(89%)|Protein:30g(60%)|Dufan:94g(145%)|Dufan Dufan:kontong(250%)|Kalastarol:456mg(152%)|Sodium:932mg(39%)|Kaliumperyamper:997mg(28%)|Fiber:3g(12%)|Sonkor:174g(193%)|Vitamin A:2395IU(48%)|Kaalshiyam:408mg(41%)|Bir:7.3mg(41%)
Sida Loo Qurxiyo Keeggaaga Koowaad
Aasaaska Qurxinta Qurxinta: Isku dheelitirka iyo Jirdilka
sida loo sameeyo icake glaze icing
sida loo akhriyo ounces miisaanka
sida loo sameeyo keega sanduuqa strawberry-ka sifiican
Shukulaatada Tusaalaha ah
Sidee loo sameeyaa shukulaatada tusaalaha ah ee doqonka u ah! Hadday nacnac dhalaasho, shukulaatada cad, shukulaatada madow ama aad rabto inaad isticmaasho gulukoos halkii aad ka isticmaali lahayd sharoobada hadhuudhka. Waxaan heysanaa dhammaan saamiga, cuntada, tilmaamaha iyo farsamooyinka guusha markasta.
Cunto Fondant (LMF)
Kani waa cuntada ugu fiican ee jecel meesha. Si fudud loo sameeyo, dhadhan macaan, weligood jeexin, jeexjeexin ama maqaarka maroodigu helo. Cunto macaan oo wanaagsan oo loogu talagalay bilowgayaasha.
© Copyright ©. Dhammaan Xuquuq Dhowran.